Midowga Europe oo Go,aan Cajiiba ka qaatay in Qudus uu u aqoonsado Caasimadda Israa’iil? – Warfaafiye:
Midowga Europe oo Go,aan Cajiiba ka qaatay in Qudus uu u aqoonsado Caasimadda Israa’iil?
Editor Super Dec 12, 2017 0
Midowga Euorope ayaa diiday Baaq uga yimid ra’iisuk wasaraha Wadanka israa’il Binjamin Natanyahu oo ku aadanaa in Midowga Europe uu aqoonsado Magaaladda Qudus in ay tahay Caasimadda isra’iil, wuxuuna sheegay in Xal Labo Wadan uu yahay Mid kaliya ee lagu dhameeyn karo Khilaaf ka u dhexeeya Is’raaiil iyo Falastiin.
Madaxa siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Europe federika Mogherini ayaa Magaladda Baraasales ku la kulantay Natanyahu, Booqashadda natanyahu ayaa hayd middii ugu horreeysay ee Ra’iisul wasaare israa’iil uu kuTago midowga Europe Muddo 22 Sano ah.
Kulankoodu wuxuu yimid wax kayar todobaad markii Madaxweeynaha Mareeykanka Donad Trump uu Magaaladda Qudus u aqoonsaday casimadda israa’iil islamarkaana uu Safaaradiisa u soo rarayo Qudus.
Madaxa siyaasadda ee Midowga Europe ayaa u sheegtay Natanyahu in midowga Europe uu ogol yahay Xal Labo dan ah oo kaliya Balse uusan magaaladda Qudus u Aqoonsaneeyn in ay noqoto Casimadda Israa’iil.
Nayanyaahu yaa Shir jaraaid ka sheegya “ in magaaladda Qudus ay ahyd Caasimadda Is’raaaiil mudoo 70 Sano ah, waxaa u maleeynayaa waxa uu Madaxweeyne trump sameeyay Xaqiida ayeymiiska saartay” ayuu yiri.
“Qudus waa Caasimadda Israa’iil, majirto cid inkiri karta, Nabadana lid kuma aha, Nabadda ayey Suurta gal ka dhigeeysaa” ayuu hadalkiisa Raaciyya natan yahu.